Doorashada guud ee dalka UK oo maanta bilaabatay iyo xisbiga muxaafadka oo ku horeeyo – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Doorashada guud ee dalka UK oo maanta bilaabatay iyo xisbiga muxaafadka oo ku horeeyo
Waxaa maanta dalka UK ka bilaawday codbixinta doorashada guud ee xisbigii dalka hoggaamin lahaa 6-da sano ee soo socota, waxaana maanta codkooda dhiibanaya dad tiro ahaan gaaraya illaa 47 milyan oo qof.
Dadka maanta codka dhiibanaya ayaa ah kuwa hore isku diiwaan geliyay, waxaana ay dooranayaan illaa 650 xildhibaan oo ka mid noqon doonna baarlamaanka dalka UK.
Doorashadaan ayaa waxaa ku tartami doonna xisbiyadda muxaafadka ah ee “Conservative Party” ee haatan haysta aqlabiyadda baarlamaanka dalka UK iyo sidoo kale xisbiga shaqaalaha ee “Labour Party”.
Ra’iisul wasaaraha dalka UK Theresa May ayaa hore u shaacisay in doorashada guud ee dalkaan la qaban doonno maanta oo ay taariikhdu tahay 8-da bisha June, taas oo ah mid waqtigii loogu talo-galay laga soo hormariyay.
Theresa May ayaa arrinkaasi uga gol-leh in hadii ay doorashadaan ku guuleysato inay awood dheeraad ah u hesho sidii ay ku dedejin lahayd in UK ay ka baxdo Midowga Yurub.
Tiro koob la sameeyay ayaa sheegaya in xisbiga muxaafadka ee “Conservative-ka” uu haatan ku horeeyo codka doorashada, waxaana natiijada hordhaca ah ee doorashada lagu dhawaaqi doonnaa kahor inta aan la gaarin 12-ka ee saqda dhexe.